संकटमा मलेसियाको रोजगारी – Tourism News Portal of Nepal
संकटमा मलेसियाको रोजगारी
१९ चैत, काठमाडौं । नेपालसँग औपचारिक रुपमा करिब १६ वर्षे रोजगारी इतिहास बोकेको वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाको श्रमबजार यतिबेला संकटपूर्ण छ । सरकारका परिवर्तित कतिपय श्रमनीति एवं पछिल्ला वर्ष मलेसियाली मूद्रा ‘रिंगिट’मा क्रमश: आएको भारी गिरावटको कारण यहाँ कार्यरत पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
मलेसियाली राष्ट्रिय बैंक ‘बैंक नेगरा’को एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ को सुरुवाती दिनमा १ अमेरिकी डलरको खरिद दर ३.१० रिंगिट रहेको थियो । तर, हाल उक्त मूल्य करिब ४.४५ रिंगिट हाराहारीमा छ । त्यतिबेला प्रति रिंगिट ३३ रुपैयाँ सटही दर भएकोमा हाल झण्डै २३.५० रुपैयाँको हाराहारीमा छ । नेपालमा बढ्दो महँगी र यता मलेसियामा घट्दो रिंगिटको दोहोरो दबाबमा यहाँ कार्यरत नेपालीहरु छन् । मुलुकमा बेरोजगारीको बाबजुत आफ्नो कमाईमै आश्रित परिवार धान्न यता गाह्रो परिरहेको मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरु बताउँछन् । ‘३/४ वर्ष पहिले एक हजार रिंगिट पठाउँदा करिब ३३ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो’ बाङसारस्थित एक रेस्टुरेन्टमा कार्यरत चितवनका हरि लामिछानेले भने, ‘अहिले त्यति नै पठाउँदा करिब १० हजार रुपैयाँ कम्ती रकम मात्र नेपाल पुग्छ । यस्तो मर्का परेपछि अब कसरी घरखर्च टार्ने ? अनि कसरी बालबच्चाको लालनपालन र पढाई चलाउने ?’ हरिजस्तै सबैजसो नेपाली कामदार रिंगिट गिरावटले मर्कामा परेका छन् । रिंगिट कमजोर हुँदा मलेसियामा पनि आयातित सामानहरुको मूल्यवृद्धि भएको छ । हाल रिंगिट गत सन् १९९७ को ‘एसियाली आर्थिक मन्दी’ यता करिब दुई दशकयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।
मलेसियामा नेपालीको मासिक न्युनतम पारिश्रमिक एक हजार रिंगिट हो । त्यसमध्ये सरकारलाई तिर्नुपर्ने लेबी रकम र होस्टलबापत मासिक करिब डेढसय रिंगिट कम्पनीले कटौती पर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसबाहेक अधिकांशले खाना आफ्नै खर्चले खानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ओभरटाइम नभएको खण्डमा मासिक ६ देखि ७ सय रिंगिट (रु.१७ हजार) बचत गर्छन् ।
अघिल्ला वर्ष सार्वजनिक बिदाका दिन नेपालीहरुको थामिनसक्नुको भीड हुने गरेको क्‍वालालम्पुरको कोताराय बजारमा अचेल नेपालीहरुको चाप कम छ । मुद्रामा आएको गिरावटका कारण मलेसियामा कार्यरत नेपालीमात्र होइन, नेपाली लक्षित व्यवसायमा पनि मन्दी आउने खतरा बढेको छ । मुद्राको अवस्था नसुध्रिए मलेसिया आउने नेपाली घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा पनि पर्ने चिन्ता उनीहरुको छ । मलेसियाली मुद्रामा आएको गिरावटले यहाँबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स समेत घट्दैछ ।
मलेसिया आउने नेपाली घटे
यसअघि आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय मुख्यतया रिंगिटको गिरावट, सरकारी नीतिमा फेरबदल एवं मलेसियाका रोजगारदाताले माग गरेअनुसार नेपाली रोजगार व्यवसायीले माग लैजान नसकेकै कारण मलेसिया आउने नेपाली घट्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘मलेसिया रोजगारी’बारे वास्तविकताभन्दा बढी आउने कतिपय नकारात्मक प्रचारप्रसार पनि यसको अर्को कारण हो । अन्यत्र भएको नराम्रा गतिविधि र समस्यालाई पनि मलेसियामा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आउनाले पनि मलेसियाप्रति नेपालीको सोचाई नकारात्मक हुने गरेको छ ।
यद्यपि प्रशस्त मागपत्र लगे पनि कामदार पाउन मुस्किल पर्ने गरेको एकजना नेपाली रोजगार व्यवसायीले बताए । ‘सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट ल्याएपछि पनि मागहरु नआएका होइनन्’ ती व्यवसायीले भने ‘तर यता आउने कामदार पाउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ ।’
किन आयो गिरावट ?
मलेसियाले उत्पादन गरेको तेल लगायत विभिन्न निर्यातजन्य सामानहरुको मूल्यमा गिरावट आयो । किनकि उसले धेरैजसो निर्यात गर्ने गरेको मुलुक अमेरिका आफैंले तेलको उत्पादन बढायो जुन पहिलेको तुलनामा अधिक थियो । त्यसैकारण अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा सीमित मात्र तेलको माग रह्यो । त्यही सीमित मागका कारण पनि तेलको मूल्यमा ह्रास आयो । यसको असर मलेसियाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो ।
त्यस्तै मलेसियाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी विदेशी लगानीकर्ताहरुको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चिनियाँ अर्थतन्त्रको प्रभाव पनि मलेसियामा पर्ने गरेको छ । मलेसियाको लागि चीन एक ठूलो निर्यातकर्ता सारथी पनि हो । त्यसैले मलेसियाली मुद्रा चिनियाँ मुद्रा युआनबाट पनि प्रभावित हुने गर्दछ । गतवर्ष चिनियाँ अर्थतन्त्रमा भएको गिरावटको असर पनि मलेसियाली मुद्रामा पर्‍यो। मलेसियाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा खासगरी आयातजन्य कतिपय उद्योग–व्यवसाय बन्द भए भने कतिपय उद्योगहरु अन्य मुलुकमा सरे । जसको कारण स्थानीय पुँजी लगानी (लोकल एसेट) पनि रिंगिटको दबाबमा परेको छ भने यसको प्रभाव मलेसियाको अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको छ ।
कहिले सुध्रेला रिंगिट ?
वैधानिक रुपमा करिब पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको ठानिएको मलेसियाको मुद्रा ‘रिंगिट’ कहिले तङ्ग्रिने हो भन्ने यकीन छैन । मलेसियाली राष्ट्रिय बैंक ‘बैंक नेगरा’ को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मलेसियाली मुद्रा गिरावट हुँदै हाल झण्डै ३० प्रतिशत कम भाउमा खुम्चिएको छ । विदेशी विनिमय दर (फरेक्स)सम्बन्धी विश्लेषण गर्ने कम्पनी ‘नोमुरा’को एक प्रक्षेपणअनुसार यसैवर्ष अन्त्यसम्ममा मलेसियाली मुद्रा करिब ४.७० रिंगिटसम्म पुग्नसक्ने अनुमान छ । तर, आउँदो वर्ष क्रमिक सुधार हुनसक्ने भनिएको छ ।